Sida loo beddelo filtarrada gudaha Tik Tok: Tababar fudud oo lagu beddelo filtarrada | Hal-abuurka Online
Xigasho: Music and Market
Qalab kale oo maanta fayras galay waa shaki la'aan Tik Tok. Kaliya maaha codsi loogu talagalay madadaalada, laakiin sidoo kale waxaa loo adeegsaday isticmaaleyaasha sida: saameeyayaasha, kubbadda cagta, atariishooyinka iyo jilayaasha, fannaaniinta iwm.
Laakiin ma aha oo kaliya inay leedahay shaqadan, laakiin sidoo kale waxaa lagu kabay qaybta farshaxanka iyo hal-abuurka weyn. Tani waa halka aan ku darayno filtarrada sawirka.
Maqaalkan, waxaanu kuugu sharxi doonaa dhowr tillaabo oo fudud, sida loo beddelo filtarradan iyo sidoo kale, waxaanu ku tusi doonaa qaar ka mid ah filtarrada ugu badan.
1.2 Waxa ku jira
2 Sida loo beddelo filtarrada ama saamaynta
2.1 Ku dar ama beddel filtarrada
3 filtarrada ugu fiican
3.1 Chroma (Shaashada Cagaaran)
3.2 waan lumay
3.3 Muraayad wanagsan
3.4 Wejiga Weyn
3.5 Waqtiga Warp Scan
Haddii aad ka mid tahay dadka aan weli ka warqabin adduunka Tik Tok, waxaan ku siin doonnaa warbixin kooban oo ku saabsan waxa codsigan uu awood u leeyahay inuu sameeyo, waxaadna fahmi doontaa sababta uu ugu moodo maanta bulshadeena dhexdeeda. .
Tik Tok waa codsi asal ahaan ka soo jeeda Aasiya, taas oo ah, waxaa lagu aasaasay Aasiya. Waxa ugu badan ee lagu garto codsigan waa fudaydka uu leeyahay in la wadaago ama la abuuro muqaal muusik. Codsiga waxaa la bilaabay Sebtembar 2016, taas oo ah, waxay qaadatay 200 oo maalmood oo keliya si loo horumariyo, markaa waxay u muuqataa inay haysteen fikrado cad cad.
Koritaankiisa ayaa sidoo kale lahaa xawaare cajiib ah, sababtoo ah sida laga soo xigtay portals Chinese, codsigu wuxuu gaaray wadar ahaan 66 milyan oo isticmaalayaasha firfircoon maalin kasta, halka ilo kale ay tilmaamayaan in ay mar hore dhaaftay 130 milyan oo xannibaad.
Hadii aan ka hadalno shaqadeeda. waxaan ku saleyn karnaa nafteena in ay ogolaato in la abuuro, wax ka beddelo oo la soo geliyo muuqaalada muusikadda 1 daqiiqo, awood u leh inaad isticmaasho saameyno kala duwan oo aad ku dari karto asalka muusiga. Waxa kale oo ay leedahay qaar ka mid ah hawlaha Sirdoonka Artificial, iyo waxaa ka mid ah saameyn gaar ah oo indhaha soo jiidata, filtarrada, iyo muuqaalada dhabta ah ee la kordhiyay.
Habka uu ugu shaqeeyo qalab maqal-muuqaal ah waa mid sahlan, waxaana ku jira xulashooyin tafatir oo sahlan oo la adeegsan karo si qof kastaa u sameeyo muuqaallo madadaalo leh isagoon lahayn xirfado tafatir oo wanaagsan. Intaa waxaa dheer, codsiga waxaa ku jira hawlo kale sida awoodda dirida fariimaha, codadka, liiska saaxiibada iyo dabcan nidaamka raacsan oo raacay. Si la mid ah qaabka Instagram, laakiin diiradda saaraya fiidiyowyada.
Fiidiyowyada ka sokow, qaabka daabacaadda nuxurku sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka abuurto fiidyow la rogrogi karo oo ka mid ah sawirro taxane ah oo aad dooratay. Intaa waxaa dheer, arjiga waxa kale oo ku jira qayb aad fariimaha ugu diri karto isticmaalayaasha kale sida aad sidoo kale ku samayn karto Instagram, oo aad xitaa wax uga beddesho profile-kaaga iyo xogta aad naftaada ka sheegtay.
Waxa ku jira
App-ka waxa uu ka kooban yahay shaashad weyn oo aan ka daawan karno muuqaallada ugu caansan ama kuwa dadka aan raacno, annaga oo awood u leh in aan kor ama hoos u siibanno si aan u dhex marno muuqaallada. Sidoo kale waxaa jira bog sahamin ah taas oo Waxaan raadin karnaa clips ama dhex mari kartaa hashtags dhexdooda taasi waxay noqon kartaa mid xiiso leh. Marka aan daawado muuqaalka, waxaa lagu soo bandhigayaa shaashad buuxda, oo ay ku yaalliin calaamado taxane ah oo midigta ah kuwaas oo aan la socon karno isticmaalaha, like, comment ama share gareey clip-ka.
Marka la soo koobo, waa codsi u shaqeeya sida shabakad bulsho, laakiin wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku shaqeyso waxyaabo farshaxan iyo muuqaal maqal ah oo ka badan codsiyada kale. Codsiga wuxuu diyaar u yahay IOS iyo Android labadaba, waana bilaash. Waa run in codsiga dhexdiisa aad ka heli karto doorashooyin tafatir oo u baahan kharash dheeraad ah, laakiin gebi ahaanteed, waa bilaash.
Bartamaha waxa kale oo aad haysataa badhanka meesha aad ka geli karto jilayaasha ugu muhiimsan ee codsiga, duubista fiidiyooga iyo agabka tafatirka. Waxaad ku duubi kartaa fiidiyowyadaada qaadasho badan, maadaama appku kaliya duubayo markaad hayso badhanka u dhigma. Dabcan, ka hor inta aanad bilaabin duubista fiidiyowga waxaad yeelan doontaa dhowr ikhtiyaar oo filtarrada iyo saamaynta kuwaas oo lagu xakameynayo.
Marka tafatirka fiidiyowga, waxaad dooran kartaa qaadashada ama wejiyada kuwaas oo aad ku dari kartaa noocyada kale ee saamaynta on adiga kuu gaar ah. Waxaad haysataa, tusaale ahaan, filtarro taxane ah oo la mid ah kuwa Instagram-ka, iyo sidoo kale noocyada kala duwan ee saamaynta si ay u maamulaan videos. Tifaftiruhu wuxuu calaamadayn doonaa meelaha kala duwan ee aad ku tafatirtay muuqaalka oo midabyo kala duwan leh.
20% dhammaan dakhliga TikTok wuxuu ka yimaadaa Mareykanka Tani runtii way ka yar tahay sidii hore iyo Shiinaha, oo leh 69%, wali waa isha ugu weyn ee dakhliga. Ka hor inta aysan soo bixin xayeysiisyada. 42% dakhligu wuxuu ka yimid Maraykanka, laakiin taasi waxay meesha ka saaraysaa dakhliga ka soo gala nooca Shiinaha ee app-ka Android.
Saldhigga isticmaale ee TikTok ayaa wali si dhow ula mid ah kan Musical.ly. Inta badan isticmaaleyaasheeda Mareykanka ee isticmaala qalabkan waa da 'yar halka 25.8% ay u dhexeeyaan 18 iyo 24 sano jir. 24.5% waa 25-34 sano jir, taas oo soo jeedinaysa in isticmaaleyaal badan oo Tik Tok ah ay isticmaaleen app, inkasta oo ay 25 jirsadeen.
En 2019 Sharci-dajiyayaasha Hindiya aad bay uga walaacsanaayeen TikTok oo waxay go'aansadeen inay si ku-meel-gaar ah u mamnuucaan app-ka. Waxay ka walaacsanaayeen in TikTok ay u soo bandhigto carruurta waxyaabo aan habboonayn. In kasta oo mamnuuciddu aanay sii socon, haddana waxay ku kacday abka ku dhawaad ​​15 milyan isticmaaleyaal cusub.
Sida loo beddelo filtarrada ama saamaynta
Shaandhaynta ama saamaynta ayaa la isticmaalaa si aad shakhsiyeyso oo aad ugu darto xitaa tafaasiil dheeraad ah fiidyahaaga. Saamayntan waxa lagu dari karaa ka hor iyo ka dib duubista fiidiyowga, laakiin saamaynta qaar ayaa la heli karaa oo keliya ka hor inta aan duubin bilaabmin, qaarna waa la heli karaa ka dib.
Si aad u duubto muuqaal leh saamaynta Tik Tok ay muujinayso, waxaad u baahan tahay inaad raacdo tillaabooyinkan:
Riix calaamadda Saamaynta dhanka bidix ee badhanka rikoodhka cas ee shaashadda kamarada.
Fiiri oo samee raadinta qaybaha kala duwan ee saamaynta oo guji mid iyaga ka mid ah.
Fiiri saamaynta oo dooro mid.
Guji shaashadda duubista oo bilow abuurista fiidiyowgaaga.
Haddii waxa aan rabno waa inaan badbaadino waa inaan badbaadino saameyn, taas awgeed waxaan haysanaa ikhtiyaarka Favorites. Xulashada ugu cadcad ayaa laga helay shaashadda, qaab calaamad calaamad ah. Kaliya waa inaad doorataa saamaynta aad rabto oo riix astaanta aan soo sheegnay. Doorashadan waxaad hubisaa in saameyntu ay had iyo jeer ku jirto gacantaada, waxaana lagu gaaraa hab aad u fudud oo fudud.
Ku dar ama beddel filtarrada
Si aad u bedesho saamaynta sida cinwaanka, waa inaad raacdaa tillaabooyinka soo socda:
Taabo qoraalka xagga hoose ee shaashadda tafatirka.
Dooro farta la rabo oo habee midabka qoraalka iyo asalka.
Riix La Sameeyay
Taabo oo jiid qoraalka si aad u dhaqaajiso meesha aad rabto ee fiidyahaaga.
Si loo cabbiro ama wax looga beddelo shaandhada ama saamaynta:
Burbur ama balaar qoraalka oo hagaaji xajmiga ee qoraalka ilaa aad ka hesho mid la doonayo.
Haddii aan rabno in aan ku darno dhejis ama emoji:
Riix stickers xagga hoose ee shaashadda tafatirka.
Dooro stickers ama Emojis tab, ama raadi sawirada GIF ee nool.
Guji qaybta aad rabto si aad u doorato oo u jiid animation meel kasta oo shaashadda ah.
filtarrada ugu fiican
Qaar ka mid ah filtarrada ugu fiican waa:
Chroma (Shaashada Cagaaran)
Xigasho: You Tube
Suurtagalnimada shaandhadani waa kuwo aan dhammaad lahayn, maadaama aad meel dhigi karto asalka aad rabto. Si aan fikrad yar ku siiyo, caannimadiisa, waxaa jira 74.7 milyan oo fiidiyoow ah oo leh filtarkan.
Shaandhayntan indhahaaga iyo afkaaga ka saar wejigaaga. awood u leh inuu ku baro shay aan noolayn ama wejiyo caan ah.
Asal ahaan, Waxay xumeyn doontaa sawirka waxayna abuuri doontaa qulqulo badan oo sawirka. Xarigga male-awaalka si aad uga faa'iidaysato.
Saamayntan ayaa soo jiidan doonta wajiga markaad dhaqaaqdo. Waxaa loo adeegsaday 13 milyan oo fiidiyow ilaa hadda.
Waqtiga Warp Scan
Shaandheeyahani wuxuu qaboojin doonaa qaybta ka sarreysa xariiqda buluugga ah, oo waxaad ku samayn kartaa farsamooyin xiiso leh.
Marka la soo koobo, Tik Tok wuxuu noqday mid ka mid ah codsiyada loogu isticmaalka badan yahay adduunka oo dhan. Waxaan dhihi lahayn bartilmaameedkeedu waa isticmaalayaasha dhalinyarada iyo dadka waaweyn labadaba. Waa codsi loo isticmaali karo shabakad bulsheed maadaama, sida la sheegay, ay leedahay tiro raacsan.
Qaar badan oo ka mid ah fiidiyowyada fayraska ugu badan ee adduunka ayaa ka yimid aaladdan, hadalkani maaha mid la yaab leh, maadaama Tik Tok uu gaadhay isticmaaleyaasha tiro aad uga badan taageerayaasha Facebook iyo Instagram marka la isku daro.
Hadda waa markii aad soo dejisan lahayd codsiga oo aad bilaabi lahayd abuurista nuxur kuu gaar ah. Waxaad ku bilaabi kartaa wax aasaasi ah, muuqaal fudud oo ah bilow waxa noqon doona hal-abuurnimadaada iyo shakhsiyaddaada. Ku dar filtarrada iyo codadka muusiga, ku dar qoraal kale oo sharxayaa waxaad rabto ama aad damacsan tahay inaad samayso, dabcan, baar oo fiirso isticmaalayaasha kale ee abuura waxyaabo la mid ah ama gabi ahaanba ka duwan kaaga.
Weli ma soo dejisay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo beddelo filtarrada Tik Tok